Alshabaab oo gaadiid ka gubay ciidanka Puntland ee duledka Boosaaso – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Alshabaab oo gaadiid ka gubay ciidanka Puntland ee duledka Boosaaso
5th May 2015 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Alshabaab ayaa xalay weerar ku qaaday bar-kaantarool oo ku taalla deegaanka Yalho oo dhaca dulleedka magaalada Boosaasoo ee gobolka Bari.
Dagaalka ayaa billowday kaddib markii Alshabaab ay weerar ku soo qaadeen ciidamo daraawiish ah oo halkaasi bar-kartarool ku leh.
Illaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi, balse qof ka mid ahaa dadka rakaab ah xilliga uu dagaalku ka socday duleedka Yalho halkaas ku sugan ayaa sheegay in uu arkay baabuur nooca dagaalka ah oo gubanaya.
Goobjoogaha ayaa VOA u sheegay in maleeshiyo ka tirsan Alshabaab ay gaadiidkii ka soo baxay magaalada Boosaaso iyo kuwii ka yimid magaalada Garoowe ay muddo saacaddo ah ku xannibeen duleedka halka uu dagaalku ka dhacay.
Alshabaab ayaa sheegay in la wareegeen saldhiga ciidanka Puntland ku lahaayeen deegaanka Yalho, ayna halkaas ku dileen 2 askarin, gacanta ku dhigeen labo gaari, mid kalana gubeen.
Dhinaca kale hal qof oo rayid ah ayaa ku dhintay kaddib markii rag hubeysan ay weerar ku soo qaadeen bar-kantarool oo ku taalla gudaha magaalada Boosaaso iyadoo ciidankii halkaasi ku sugnaa ay iska caabiyeen raggii soo weeraray.
John Kerry oo Nairobi ka yiri: Sax maaha in qaxootiga Soomaaliyeed qasab lagu celiyo
Dalalka Bariga Afrika oo xal u raadinaya kacdoon ka taagan Burundi